Wasiirka Warfaafinta Puntland ” Hasha geela cunta oo cabaadda weeye Somaliland” (DHAGAYSO). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wasiirka Warfaafinta Puntland ” Hasha geela cunta oo cabaadda weeye Somaliland” (DHAGAYSO).
Wasiirka Warfaafinta Puntland ” Hasha geela cunta oo cabaadda weeye Somaliland” (DHAGAYSO).
June 13, 2018 - By: Mohamed Dahir
Wasiirka Warfaafinta,isgaarsiinta,Hidaha,Dhaqanka &Boostada Dowladda Puntand Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) oo shir-jaraod ku qabtay xafiiskiisa wasaaradda ayaa ka hadlay xaaladda Tukaraq,Afduubka dad shacab ah loogu gaystay degaanka Caynaba & hadalkii faisal cali waraabe.
Wasiirku waxaa uu sheegay in aanay jirin wax wada hadal ah oo Puntland kala galayso Somaliland ee ku adan arrimaha Gobolka Sool,mar la weydiiyey in ay jiraan dadaalo beesha calamku ay wado oo la xiriira dhexdhaxadin labada Maamul ayuu yiri ” adeer Somaliland waa Hasha Geela Cunta oo hadana cabaada,arrinta besha calamkana ma jiraan cid aan wadan kayaga wada hadal kala galayno,cidii hadal rabtaa waa inay ciideedii tagtaa oo ka baxaan dhulka aanay lahayn” Wasiir Qarjab.
Halkaan ka dhagayso Codka Wasiirka Warfaafinta Puntland.